सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले आजै रा’जिनामा दिदै ! – Life Nepali
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले आजै रा’जिनामा दिदै !
काठमान्डौ। सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आजै राजिनामा गर्ने भएका छन । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको डिलमा ७० करोड कमिसन मागेको भनिएको अडियो सार्बजनिक भएपछि उनले राजीनामा गर्ने तयारी भएको हो । आज दिउँसो ३ बजे मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनपछि उनले रा’जीनामा दिने छन । सार्वजनिक भएको अडियोका विषयमा भने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले नखाएको बिस नलाग्ने आफूले ग’ल्ती गरेको भए सजाय भो’ग्न त’यार रहेको प्रतिकृया दिइसकेका छन्।
यो अडियो सा’र्वजनिक भएपछि प्र’तिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सञ्चारमन्त्रीलाई ब’र्खास्त गर्न माग गरेको छ। भने पूर्व माओवादी र कतिपय एमालेकै नेताहरुले पनि राजीनामा गर्नै पर्ने बताएका छन्। स्म’रण रहोस सरकारले सुरुमा स्वी’स कम्पनीलाई दिने भनिएपनि पछिल्लो समयमा जर्मनी कम्पनीलाई दिन लागिएपछि अडियो सार्वजनिक भएको हो। प्र’स्ताव अस्विकृत भएलगत्तै स्विस कम्पनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत यो अडियो यसअघि नै सुनाईसकेको छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्वीस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिसँग सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबीच कथित रुपमा भएको कमिसनको ‘डिलिङ’ अडियो सार्वजनिक भएको छ ।
काभ्रेको धुलिखेलमा स्थापना गर्ने भनिएको से’क्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्वीस कम्पनीसँग सुरुमा कुरा भएपनि उसलाई नदिएर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएपछि स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्टले बास्कोटासँग भएको घु’स प्र’करणको अडियो क्लिप बुधबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएका हुन् ।त्यही अडियो क्लिप यतिबेला स’ञ्चारमाध्यममा भाइरल बनिरहेको छ । स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्ट प्रकाश शर्मा भनिने विजय प्रकाश मिश्रले बा’स्कोटासँग भएको कुराकानीको अडियो क्लिप करिब डेढ महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थिए ।
Previous गोकुल बास्कोटाले तुरुन्त राजिनामा दिनु पर्छ,नदिए “कार्यकक्ष” बाटै पक्राउ गरिनु पर्छ -रवि लामिछाने
Next देशमा विकास हुन न’सक्नुका का’रण खोज्न आवश्यक छ – उर्जामन्त्री पुन